Noma ngezikhathi ezithile izifo. Ngezinye izikhathi kungaba isiyezi okungazelelwe, ukulahlekelwa ibhalansi, kwenhliziyo, noma ezinye zithi ngokomzimba ngisho engqondo ezibonakala zincane. Abanye bangase uzamukele ngoba izimpawu zokuqala yesifo futhi ukucela umuntu engakutholi imbangela izifo, yena ubeka kwezidakamizwa angabuye, kungababangela ezinye izimpawu ungakhululekile. Kodwa uma uzama ukukhomba isizathu sangempela esenza ngokuzumayo ngezipikili ziba ziyaqothuka, noma kungani isimo melancholy uvame ukuhlasela ngokungadingekile (njengoba kubonakala), ikhanda, futhi umuzwa ukukhathala okungamahlalakhona, oza kuphela esiphethweni esinembile sokuthi umzimba sintula magnesium.
Magnesium - akuyona nje isici amakhemikhali ishadi lesikhathi. Lona omunye namaminerali abalulekile kakhulu emzimbeni womuntu, oyingxenye ithambo ziyingxenye calcium ne phosphorus. Futhi, okuqukethwe magnesium ukudla kuqinisekisa ukusebenza ungaphazanyiswa of imisipha yenhliziyo. Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela lesi sici emzimbeni kungaholela ukwephula ukushaya kwenhliziyo nomfutho wegazi, Ukudlikizela kanye muscle izinhlungu zibe, yingakho kubalulekile ukwazi ukuthi yikuphi ukudla aqukethe magnesium, kumele ube ku-desktop yakho.
Ngokuvamile kuntuleka i-magnesium emzimbeni ithuthukiswe ngesisekelo ukucindezeleka, ukudla okungenawo umsoco, yomsebenzi omkhulu engqondweni, akhathazayo ukuqeqeshwa ezemidlalo, utshwala nezinye izinto okuyinto umuntu umane akusho ukunaka.
Yingakho kubalulekile ukuze ukwazi ukuthi eziningi imikhiqizo magnesium. Ngokungangabazeki inani elikhulu yezimbiwa une-cocoa, Nokho, phakathi kwenqubo yezimboni okusanhlamvu yayo, ukhokho umkhiqizo kuba umdlavuza, futhi hhayi Kunconywa ukusebenzisa in esiningi.
Ukuze imikhiqizo equkethe magnesium, futhi zihlanganisa nati, soy, ubhontshisi, uphizi nezinye izithako ezisetshenziswa yilezi zimila. Kodwa kwakungeke ubuhlungu ukwazi ukuthi magnesium kuqukethwe mikhiqizo kuphela uma fresh. I okusemathinini uphizi, ubhontshisi, ummbila, njll cishe zonke amaminerali eziqukethwe ukugcwaliswa, okuyinto evame ngobuwula umane athululé echibini. Eqinisweni, lolu ketshezi kungenziwa kahle esetshenziselwa ukulungiswa nososo ehlukahlukene, amasobho kanye kusaladi.
Futhi, semali magnesium eziqukethwe okusanhlamvu poppy. Ngakho-ke, into engenamsebenzi ngokuya okuqukethwe kwaleli trace element Bun, kungaba wusizo kakhulu uma kuba ukunambitheka obuhle imbewu poppy. Uma baking asifanele ngenxa yokwesaba bonakalise sibalo, kuyafaneleka ukunaka imikhiqizo efana equkethe magnesium njengoba rye noma bran isinkwa, nokunye okufana nokolweni, pearl ibhali, semolina noma amabele oluthile lokudla, ikhabe, isipinashi, oatmeal.
imikhiqizo Inyama equkethe magnesium - ke, ngaphezu kwakho konke, ham isibindi, ngemva kwalokho uhlu kuyinto unogwaja ke inyama yenkonyana ingulube. I amaminerali Ingase ithanyelwe ngisho imikhiqizo namasoseji, kodwa kuphela uma kuhambisana yonke ubuchwepheshe neziqondiso. Lezi okujabulisa ukudla zihlanganisa amateur itiye amasosishi izinja ashisayo. A abathandi amnandi angase aphathe kahle ngokwakho chocolate ezinhle, ngoba isakhiwo zalo eziyisisekelo - kuyinto cocoa, osuvele ezaziwayo ukuthi zinokwaziswa magnesium.
Uma sikhuluma ngalokho esilinganayo magnesium ziphele ngelanga, bonke ngamunye lapha. Kodwa ngokwesilinganiso, umzimba womuntu kudingeka okungenani ube 300 mg amaminerali nsuku zonke. Uma kungekho amandla noma isifiso kudle njalo nokudla okune-magnesium, noma uma umzimba udinga lokhu izakhi yezimbiwa trace esikhathini esifushane, ungakwazi ukushintsha imikhiqizo powder noma amaphilisi. Ngokuvamile, lezi imithi futhi i-calcium, okuyinto nakanjani zithinta isikhumba, izinwele nezinzipho izinga.
Isipho engcono - kwakheka iqoqo elihle izithelo elimnandi
Automobile compressors "umqali" - amandla kanye nekhwalithi